Ukwazisa inkampani yethu kunye nefektri xa sinikezela ngokufudumala kwesikhumbuzo senkampani.I-Sichuan Yibin Tea Industry Import & Export Co., Ltd. yasekwa ngoNovemba, 2020, notyalo-mali jikelele lwe-10,0...
Inkampani yaseSichuan Yibin yokuThutha iTea kunye neNkampani yokuThumela ngaphandle iye kumboniso we-SIAL CHINA wowama-2021.
Inkampani yaseSichuan Yibin yokuThutha iTea kunye neNkampani yokuThumela ngaphandle iye kumboniso we-SIAL CHINA wowama-2021.Inombolo yendlwana yi-G038.Wamkelekile ukusindwendwela!
Inkampani yaseSichuan Yibin yokuThutha iTea kunye neNkampani yokuThumela ngaphandle izimase iForam yoRhwebo kunye noTyalo-mali yiYibin-Ethiopia
ngu admin ngo 21-05-12
Ukuze kukhuthazwe intsebenziswano phakathi kwe-Yibin kunye ne-Ethiopia kwiinkalo zorhwebo kunye notyalo-mali, i-Consul General ye-Consulate General yaseTopiya e-Chongqing i tyelela i-Yibin kwaye ibambe i-Yibin-Ethiopia yoRhwebo kunye ne-Investment Forum ngoMeyi 12th.Kwintlanganiso, umphathi wokuthumela ngaphandle ovela eSichuan Yibin Te...
I-Sichuan Yibin Tea iya kuthatha inxaxheba kwi-129th online Canton Fair ukusuka kwi-20210415-20210424
ngu admin nge 21-04-21
I-Sichuan Yibin Tea Industry Import & Export Co., Ltd iza kuthatha inxaxheba kwi-129th online Canton Fair ukusuka nge-15 ka-Epreli ukuya kwi-24 ka-Epreli ngo-2021. Iimveliso eziboniswayo ziquka iti eluhlaza yeChunmee, iti emnyama, iti ye-kuding, iti yejinja, iti yejasmine kunye nezinye. iimveliso.Wamkelekile kwindawo yokubonisa ye-intanethi ye...
Uphononongo lokuthunyelwa ngaphandle kwemveliso yeti yaseTshayina ngo-2020: inani lokuthunyelwa ngaphandle kweentlobo ngeentlobo zeti liye lehla ngokubanzi.
Ngokwedatha yeCustoms yaseTshayina, ngoDisemba ka-2020, umthamo wokuthunyelwa kweti eTshayina wawuziitoni ezingama-24,600, ukwehla konyaka-ngonyaka nge-24.88%, kwaye ixabiso lokuthumela ngaphandle laliyi-159 yezigidi zeedola zaseMelika, ukwehla konyaka-ngonyaka nge-17.11%.Umyinge wexabiso lokuthumela ngaphandle ngoDisemba laliyi-US $ 6.47/kg, xa kuthelekiswa no-2019. Ngexesha elifanayo...